Izinhlobo zemvula: izici, imvelaphi nokwakheka ngokwamafu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kukhona okuhlukile izinhlobo zemvula, njengoba ngayinye inezimpawu nemvelaphi ehlukile. Siyazi ukuthi amafu akhiwa inani elikhulu lamanzi we-gothic namakristalu amancane eqhwa aqhamuka ekushintsheni kwesimo somhwamuko wamanzi asephile futhi aqinile kusuka kusisindo somoya. Lapho ifu ligcwele amaconsi amanzi nezimo zezemvelo zivumelana, liqala ukuna. Ungabona izinhlobo ezahlukahlukene zemvula futhi izici zazo zehlukile.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngezinhlobo ezahlukene zemvula nezici zazo.
1 Imvula yakhiwa kanjani
2 Izinhlobo zemvula
3 Izinhlobo zemvula kuya ngamafu
Imvula yakhiwa kanjani
Into yokuqala ukwazi ukuthi izimvula zikhiqizwa kanjani. Siyazi ukuthi lapho umoya ezindaweni ushisa futhi uphakame phezulu. Ngenkathi ku-troposphere, umoya unciphisa izinga lokushisa kwawo njengoba ukuphakama kukhuphuka. Ngokuya phezulu kuya kubanda. Ngakho-ke, lapho isisindo somoya sikhuphuka sihlangabezana nomoya obandayo bese sigcwala umswakama. Lapho umoya ubanda, amaconsi amanzi noma amakristalu eqhwa akha, kuya ngezinga lokushisa lomoya ozungezile.
La mathonsi amanzi akha futhi ajoyine izinhlayiya ezinobubanzi obungaphansi kwamakhonsoni amabili abizwa ngokuthi yi-hygroscopic condensation nuclei. Njengoba kunamathiselwe kulezi zinombolo ze-condensation, ubukhulu bomoya abuyeki ukukhuphuka futhi kwakheka ifu elaziwa njengokuthuthuka mpo. Lezi zinhlobo zamafu zivame ukwenziwa ukungazinzi komkhathi. Lapho ifinyelela ubukhulu obukhulu nokuthuthuka okuqondile, ayivumeli neze ukuthi imisebe yelanga idlule.
Ukuze umusi osendaweni yemoya ufinyelele ukugcwala, kufanele ujijike ngohlobo lwamaconsi amanzi futhi kufanele kuhlangatshezwane nemibandela eminingana. Okokuqala ukuthi ubukhulu bomoya bukwazile ukupholisa ngokwanele ukuze ifu lakheke. Isimo sesibili ukuthi kumele kube nezakhi ezanele zokuncipha emoyeni lapho kungenza khona amaconsi amanzi. Uma ifu selakhiwe, kunezimo ezikhiqiza izinhlobo ezahlukene zemvula. Amandla amabili asebenza econsini ngalinye lamanzi: lokho ngenxa yokudonsa okukhona kuwo umoya ophakeme kuwo nakwisisindo sedonsa uqobo kanye nesenzo samandla adonsela phansi.
Lapho amaconsi amanzi emakhulu ngokwanele ukunqoba amandla okuhudula awela phansi. Uma amaconsi amanzi echitha isikhathi eside efwini, aba maningi. Ngaphezu kwalokho, kuya ngesikhathi lapho amaconsi achitha ekhuphuka futhi ehla efwini nokuthi lingakanani inani lamanzi efwini ngokwalo.
Uma sesazi imvelaphi yezimvula, sizobona ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zemvula. Lezi zinhlobo zenzeka ngokuya ngesimo nosayizi wamaconsi amanzi ancipha ngokusho kwezimo zemvelo. Singathola ama-drizzles, imvula, isichotho, iqhwa, imvula, imvula, njll. Ake sihlaziye ukuthi iziphi eziyinhloko.
Isifutho: Kuluhlobo lwemvula ukunakekela amaconsi amanzi mancane kakhulu futhi angaba nesimo esilinganayo. Imvamisa azimanzisi kakhulu inhlabathi, yize kuncike kwezinye izinto ezinjengejubane lomoya nomswakama ohlobene. Uma kunejubane lomoya eliphansi, uma bengathola ukumanzisa umhlabathi kakhudlwana.
Imvula: Yilezo eziqukethe amaconsi amakhulu futhi zivame ukunikeza ngodlame. Isici esiyinhloko samashawa ukuthi bawa kakhulu kepha isikhathi esifushane kakhulu. Lezo zindawo lapho kunezindawo ezinengcindezi ephansi yomkhathi, kuvame ukwakhiwa isikhungo sezingcindezi eziphansi, kwakheke iziphepho. Le yindawo ekahle yokwakhiwa kwezihlambi. Zihlobene futhi nohlobo lwamafu olwaziwa ngokuthi yiCumulonimbus olukhiqizwa ngokushesha okukhulu, okwenza amathonsi amanzi abe makhulu kakhulu.
Isichotho namakhekheba eqhwa: Siyazi ukuthi izinhlobo ezahlukene zemvula nazo zingaqina. Ukuze lokhu kwenzeke, emafwini kufanele kube khona amakristalu eqhwa akhiwe emazingeni okushisa aphansi kakhulu. Lawa mazinga okushisa azungeze -40 degrees. Amakristalu e-Ice angakhula ngenxa yamaconsi amanzi asezingeni lokushisa eliphansi kakhulu awafriza. Lokhu kuqala ukwakheka kwesichotho. Bangakwazi futhi ukuhlangana namanye amakristalu bese benza amakhekheba eqhwa. Lapho ifinyelela usayizi ofanele, amandla adonsela phansi ngaphambi kwawo wonke umsebenzi. Uma izimo zemvelo zifanelekile, imvula izophuma ifomu eliqinile.
Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi amakhekheba eqhwa ahleliwe ahlangane nongqimba lomoya ofudumele ekwindla kwawo ancibilike ngaphambi kokufika phansi.
Izinhlobo zemvula kuya ngamafu
Siyazi ukuthi kuya ngohlobo lwefu nezimo zemvelo ezikhona kuzoba nezinhlobo ezahlukene zemvula. Kulokhu, izimvula ezivame kakhulu yilezo zohlobo lwangaphambili, lwe-orographic nolokuhambisa noma lwesiphepho. Imvula engaphambili ingenye lapho amafu ahlotshaniswa khona nezindawo ezifudumele nezibandayo. Lapho kunesiphambano phakathi kwengaphambili elifudumele nelibandayo, amafu ayakheka futhi imvula yohlobo lwangaphambili ihlala.
Siyazi ukuthi ingaphambili elibandayo lakha lapho isisindo somoya obandayo sidudula futhi sigudluze inqwaba yezinga lokushisa eliphakeme liye phezulu. Ngesikhathi sokukhuphuka komoya ofudumele, iyaphola lapho ifinyelela ezindaweni eziphakeme futhi inikeze ukwakheka kobumnyama. Endabeni yengaphambili elifudumele, yisisindo somoya esishisayo esisheleleka phezu kwesinye ngokushisa okuphansi.
Lapho kubanda ingaphambili elibandayo, uhlobo lwefu olwakhekayo yi- Cumulonimbus noma i-Altocumulus. Bajwayele ukukhula okuqonde mpo futhi imvula enkulu idala amanzi amaningi kakhulu. Usayizi webhuthi mkhulu kakhulu kunalawo akhiwe ezingxenyeni ezifudumele. Ngakolunye uhlangothi, amafu akha okuphambene nokufudumele anomumo ohlukaniswe ngokwengeziwe. Imvamisa ziwuhlobo INimboestratus, Estratus, Stratocumulus. Imikhawulo efudumele ikhiqiza izinhlobo zemvula ezinesizotha ezinjengeziqhwa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinhlobo ezahlukahlukene zemvula nezimo zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinhlobo zemvula